စာရိတ္တမွန် (Text) - Islamic Religious Affairs Council
You are here: Home ကျမ်းဂန် စာရိတ္တမွန် (Text)
Published: 01 January 1970 | Written by မုဟမ္မဒ် အုဆ်မာန် ဦးတင့်ဦးလွင် (တောင်ကြီး) | Hits: 3313
၁။ အစ္စလာမ်ကောင်စီဌာနချုပ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အမှာ
၁၃။ အုဆ်မာန် ဇွန်နူရိုင်းန်၏စာရိတ္တမွန်
၁၄။ အလီဗင်န် အဗူတွာလိဗ်၏စာရိတ္တမွန်
၁၈။ စရိုက်ကောင်းသူ ဒေါသထိန်း၏
၁၉။ ကောင်းရာ ဆိုတတ်သူ ကောင်းရာ ကြားရ၏
အစ္စလာမ်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အမှာ
ဤကျမ်းငယ်သည် စအူဒီ အရေးဗီးယားနိုင်ငံ၊ရီယာဒ်မြို့၊ဒါရုလ် စလာမ် မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ မောင်လာနာ အဗ္ဗဒုလ် မာလိက် မုဂျာဟိဒ်}ကGoodCharacter(စာရိတ္တမွန်)ဟူသည့်အမည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်ကို ဆရာ မုဟမ္မဒ် အုဆ်မာန် ဦးတင့်ဦးလွင်(တောင်ကြီး)က ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သည့်စာရိတ္တကို ဆင်မြန်းခြင်းဖြင့် ဆင်မြန်း သူကိုယ်တိုင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့်အပြင် ဆင်မြန်းသူ၏ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ မိမိအား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်၏ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို ခံယူရရှိစေသည့် အကြောင်းခံဖြစ်သဖြင့် ဆင်မြန်းသူအတွက် ဤလောကီနှင့် နောင်တမလွန်၊ နှစ်ဘဝ၊ နှစ်ဌာနလုံး အောင်မြင်စေသည့် အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဤမျှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် စာရိတ္တမွန်ကို လူကြီး-လူငယ်၊ကျား-မ၊ မရွေး ၊ လူသားတိုင်းပင် ဆင်မြန်း အပ်သည်ဖြစ်ပေရာ အစ္စလာမ်သာသနာက သွန်သင်ပြသသည့် စာရိတ္တမွန်ကို အများသူငါ လွယ်လင့်တကူ သိရှိ နားလည် သဘောပေါက် လိုက်နာ ကျင့်သုံနိုင်ကြစေရန် ရည်သန်၍ ဤကျမ်းငယ်ကို အစ္စလာမ့်စာစဉ်(၅၆)အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။
မွတ်စလင်မ်တို့သည် အခြားသူများ (မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်စေ၊မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူဖြစ်စေ) ရှေ့မှောက်၌ ကောင်းမြတ်သည့်ကိုယ်ကျင့်တရား(စာရိတ္တမွန်)ကို ဖော်ထုတ် ပြသကြရမည်ဟူ၍ များပြားလှစွာသော ကုန်အာန် အာယသ်တော်နှင့် ဟဒီဆ်တော်တို့၌လမ်းညွှန်ထားပါသည်။ စာရိတ္တမွန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် အဖော် မွန်ဖြစ်စေရန် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကြိုးစားသွား ရပေမည်။ ဤကောင်းမြတ်သည့်အရည်အသွေးတို့ကိုနောင်လာ မည့်မျိုးဆက်သစ်တို့ထံ သင်ကြားလက်ဆင့်ကမ်းရန် အရေးကြီးလှပါသည်။ မိဘများသည် မိမိတို့ ရင်သွေးငယ်များအား သင်ကြား ပေးရာ၌ အထောက်အကူရရေးအလို့ငှာ ဤစာအုပ်ကို ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်ဟု မူရင်း စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေသူ အဗ်ဒုလ်မာလိက် မုဂျာဟိဒ်ကဆိုထား၏။
ဤစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်အား အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဟာဂျီဦးတင်ဝင်းက လက်ဆောင်ပေးခဲ့၏။ ဘာသာပြန်ရေးသားစေလို ကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ဟုတ်ကဲ့ ဟုဆိုခဲ့မိ၏။
ဤကျမ်းငယ်ကိုဖတ်ရှုဖြစ်သော်အခါ ကောက်ကာငင်ကာ တစ်ထိုင်တည်းနှင့်ပင် အစမှအဆုံးတိုင် ပြန်ဆိုရေးသားမိပါလေ၏။
အကြောင်းသော် ဤစာအုပ်သည် ရင်သွေးငယ်များ အတွက် ရည်ရွယ်သည်ဟုဖော်ပြထားပါသော်လည်း စင်စစ်၌မူ သိတတ်နားလည်စလူငယ်အရွယ်မှ ဆံဖြူ သွားကျိုးတောင်ဝှေးကိုင်အရွယ်ထိ မရှိမဖြစ် အရေးပါသည့် အကြောင်းရပ် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တည်း။ ထို့ကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ရေ ... ဟူသော ပုံသဏ္ဌာန်အား အသုံးမပြုဘဲ ကျမ်းစာပေအသွင်အတိုင်းသာ ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ရပေသည်။
ဤစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်ကပြောသော ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်၌ ကောင်းမြတ်သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ ထိပ်ဆုံးတန်းကပင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိရှိ နားလည် နိုင်ကြပါစေ။ စံနမူနာပြသနိုင်ကြပါစေ၊ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေ အမွေပေးနိုင် ကြပါစေဟု ဒုအာအ်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။
မုဟမ္မဒ် အုဆ်မာန် တင့်ဦးလွင် (တောင်ကြီး)
မလွဲဧကန် ချီးကျူး ထောမနာပြုခြင်း အပေါင်းတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာလျှင်တည်း။ ကျွန်တော်မျိုး တို့သည် အရှင်မြတ်အား ဂုဏ်တော်မွမ်း ချီးကျူးကြပါသည်။ အရှင်မြတ်ထံ ကူညီဆောင်မမှုနှင့် ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းခံပါသည်။ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် မိမိတို့၏ မကောင်းမှုလုပ်ရပ်များ၊ ပြစ်မှု ဒုစရိုက်များမှ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ခိုလှုံပါ၏။
အကြင်မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းညွှန် ထိန်းကျောင်းမှုကိုခံယူရပါလျှင်ထိုသူ့အားမည်သူမျှလမ်းမှားအောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်၊ ထိုနည်းတူ အကြင်မည်သူပင်ဖြစ်စေ၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကထိုသူ့အားလမ်းမှား၌ထားတော်မူခဲ့ပါလျှင် မည်သူကမျှ ထိုသူ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။တစ်ပါးတည်း သန့်စင်စွာ တည်ရှိတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပအခြား မည်သည်ကမျှ ခçဝပ် ကိုးကွယ်မှုခံထိုက်ရာမရှိကြောင်း၊ ၄င်းပြင် မုဟမ္မဒ်သည် အရှင်မြတ်၏ကျွန်နှင့်အရှင်မြတ်၏ စေတမန်တော် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးသက်သေခံပါ၏။
မြင့်မြတ်တော်မူလှစွာသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ .....
အို.....သက်ဝင်ယုံကြည်သူ (မုအ်မင်န်) အပေါင်းတို့၊
အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေအပ်သည့်အတိုင်း အကြောက်တရားထားရှိကြလေကုန်၊
၄င်းပြင် မွတ်စလင်မ်များအဖြစ်မှတစ်ပါး အခြားအဖြစ်နှင့် မသေဆုံးကြကုန်လင့် ။
မိမိတို့အားဖန်ဆင်း ပျိုးထောင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ခန့်ညား ကြလေကုန်။
ထိုအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား အသက် တစ်ခုတည်း (အာဒမ်)မှ ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏။
၄င်းနောက် သူတို့နှစ်ဦးမှ များပြားလှစွာသော ယောကျာ်း၊ မိန်းမတို့ကို ပြန့်ပွားစေတော်မူခဲ့သည်။
အသင်တို့ (အချင်းချင်း သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို) တောင်းခံကြကုန်ရာဝယ်
အကြင်အရှင်မြတ်ကို ကြောက်ရွံ့ ကြပါလေကုန်။
၄င်းပြင် ဆွေမျိုးညာတကာ(တို့အားနစ်နာစေခြင်းမှ)ကြဉ်ရှောင် ကြလော့။
ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သည်သာ အသင်တို့အပေါ်ဝယ်
စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထိန်းသိမ်းလျက် ရှိတော်မူသော အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ခန့်ညားကြကုန်။
ထိုမှတစ်ပါး တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်သော စကားကိုသာ အသင်တို့ပြောဆိုကြကုန်၊
ထိုအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့ အဖို့ အသင်တို့၏ ကျင့်မူချက်များကို ပြုပြင်ပေးသနား တော်မူပြီး၊
သင်တို့၏ ပြစ်မှုဒုစရိုက်များကို ခွင့်လွှတ်တော် မူပေမည်။
စင်စစ်သော်ကား အကြင်မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကို လည်းကောင်း၊
မလွဲဧကန် ထိုသူသည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ အောင်မြင်ပြီးဖြစ်မည်တကား။
စင်စစ် အမှန်ကန်ဆုံးသောစကားရပ်သည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော် (ကုရ်အာန်) နှင့်
အကောင်းဆုံးသော လမ်းညွှန်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ လမ်းညွှန်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း ထွင်လုံးတိုင်းသည် ဧကန်ပင် ကျိန်စာသင့်စေသော ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
ယင်း ဖန်တီးမှုတိုင်းသည် အမှားလမ်းစဉ်များဖြစ်ပြီး
မှတ်ချက် ။ ။သာသနာ့ရေးရာထွင်လုံးများဟူသည် ကျမ်းမြတ်ကုန်အာန်၊ ဟဒီဆ်တော်များနှင့် မညီညွတ်သော၊ အံမဝင်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။
ကောင်းမြတ်သော အကျင့်စာရိတ္တဟူသည် အဘယ် အရာကို ခေါ်ဆိုပါသနည်း။၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တင်ပြပါအံ့။
တစ်ခါက ဖခင်ဖြစ်သူသည် သူ့သားသမီး၊ကလေးငယ်တို့အား အထက်ပါမေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ၄င်းတို့က ဤသို့ပင် အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပါ၏။
အို..ဖခင်၊စာရိတ္တမွန်ဆိုသည်မှာ ရွှင်ပြသောမျက်နှာရှိခြင်း၊ အလှူဒါနပြုခြင်း၊ ကြီးသူကိုရိုသေ လေးစားခြင်းနှင့် ကလေးများအား ကြင်နာ သနားတတ်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်ဟုပြော၏။
အမှန်အားဖြင့် စာရိတ္တမွန်သည် ဒေါသကို ချုပ်တည်းတတ်ခြင်းနှင့် တစ်ပါးသူကို မထိခိုက်၊ မနစ်နာစေခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည် ဟု ပြောလေ၏။
စာရိတ္တကောင်းသူသည် တစ်ပါးသူကို အမုန်းမပွားတတ်သူ၊ လူသားအားလုံးတို့ကို ချစ်ခင်တတ်သူပင်ဖြစ်ပါသည် ဟု ပြောဆိုပါ၏။
ဤတွင် သမီးဖြစ်သူက -
အို..ဖခင်၊ ကျွန်မ၏အမြင်အရ စာရိတ္တမွန်ဟူသည် စင်စစ်၌ တားမြစ်ထားသော အရာများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် ကောင်းမြတ်သော အရာများကိုပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလောဟုဆို၏။
ထိုအခါ ဖခင်ကြီးက ရယ်မောလျက် ဤသို့ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
သင်တို့ ဖော်ပြသမျှသည် ပြည့်စုံသော အဖြေ၏ အစိတ်အပိုင်းလေးများကို ကိုယ်စီ ရည်ညွှန်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တင့်တယ်သောအရာကိစ္စမှန်သမျှ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ညစ်ထည်းဆိုးရွားသော မကောင်းမှု မှန်သမျှ တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဟုသာ ပကတိ ရိုးသား ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရပေသည်။
မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ဤသို့စာရိတ္တမွန် ချီးမြှင့်ရရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဆန္ဒပြုကြပါစို့။
ကြီးကဲ ထွတ်မြတ်လှစွာသော အနန္တစွမ်းအားရှင်က ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌ စာရိတ္တမွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့မိန့်ကြားလမ်းညွှန်ထားတော်မူပါသည်။
အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်မှအပ အခြားအရာကို မကိုးကွယ် ကြလေနှင့်။
၄င်းပြင်လူတို့နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံကြပါလေကုန်၊
သို့သာမက ဆွလာသ် ဝတ်ပြုကြပြီး၊ ဇကာသ် ပေးဆောင်ကြပါကုန်။
ကောင်းမြတ်သော စာရိတ္တအလို့ငှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင်က ဖိတ်ခေါ်နေကြောင်း ဤအာယသ်တော်မှ ဖော်ပြနေပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကောင်းမွန်သော စာရိတ္တရှင် တို့၏ အရည်အချင်းများကို ဖော်ပြထားပြန်သည်မှာ ...
အနန္တဂုဏ်တော်ရှင်၏ ကျွန်များသည် အကြင်သူတို့ပင်၊
သူတို့သည် ပထဝီမြေပေါ်ဝယ် ဖြည်းညင်းစွာဖြင့်
ဣနြေ္ဒ သိက္ခာရှိစွာ လျှောက်လှမ်းကြကုန်၏။
သူတို့အား (ယုတ်ညံ့စွာ) ပြောဆိုကြသောအခါ
၄င်းတို့သည် ညင်သာ ငြိမ်းချမ်းစွာ တုံ့ ပြန်ပြောဆိုကြကုန်၏ ။
သို့ရှိရာ မွတ်စ်လင်မ်ဟူသည် မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင့်အတွက် မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချတတ်သူ၊ အရှင်မြတ်၏ အဖန်ဆင်းခံများအား ဝင့်ဝါမောက်မာစွာ မဆက်ဆံတတ်သူပင်ဖြစ်ပါ၏။ မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည်အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူများဖြစ်ကြပါသည်။
ကောင်းမြတ်သော စာရိတ္တရှင်တို့သည် သိမ်မွေ့ နူးညံ့ ကြ၏။ မာနမထားတတ်ကြ။ မသိဆိုးရွား မိုက်မဲမှုများကို ညင်သာ သိမ်မွေ့ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ကြ၏။ တစ်ဇွတ်ထိုး မိုက်ရူးရဲ မလုပ်ကြချေ။ နေ့ဘက်လူအများနှင့်တွေ့ဆုံချိန်၌ ဤသို့ဖြစ်ပြီး လူတို့၏မျက်ကွယ် ညည့်ဘက်၌တွင်မူ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုကောင်းမှုပွားများကြပါ၏။
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အား ဖန်ဆင်းပျိုးထောင်တော် မူသော အရှင်မြတ်၏ ရှေ့တော်မှောက်ဝယ်
ပျပ်ဝပ်ဦးချ၍ စဂ်ျဒဟ် ပြုကြလျက် ၊ ကိယာမ် မတ်တတ်ရပ်ကြလျက် ညဉ့် အချိန်ကို ကုန်လွန်စေကြကုန်၏။
အမှန်ပင်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အရှင့်စေတမန်တော်(ဆွ)အား သူ့စာရိတ္တမွန်အပေါ်ချီးကျူးတော်မူထားပေသည်။
မုချဧကန် အသင်(မုဟမ္မဒ်)သည် ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်လှသော အကျင့်စာရိတ္တများအပေါ်၌ တည်ရှိပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အကောင်းဆုံး စာရိတ္တမွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မုအ်မင်န်တို့၏ မိခင်မွန်တစ်ဦးဖြစ်သူ အာအိရှဟ် သခင်မ(ရ)က ဤသို့ ပြောဆိုဖော်ပြခဲ့ပါ၏။
ကိုယ်တော်မြတ်၏ စာရိတ္တ သဘောသကန်သည် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်(အတိုင်း)ပင်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။
(ဆွဟီးဟ်မွတ်စလင်မ်ကျမ်း- စဉ် - ၇၄၆)
( သဖ်စီရ် အဗ်ဒုရ် ရဇ်ဇာက်ကျမ်း-စဉ်-၃၂၇၅)
အကောင်းမြတ်ဆုံး အပြည့်စုံဆုံး စာရိတ္တရှင်
ဧကန်အမှန် ငါကိုယ်တော်သည် မြင့်မြတ်ထူးခြားလှစွာသော စာရိတ္တမွန်ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစေပြီး (အသင်တို့ထံ) စေလွှတ်ခြင်းခံရ၏ ။
မိမိ၏အကျင့်စာရိတ္တကို ထူးခြားမြင့်မားပြီး ပြည့်စုံသွားသည်အထိ မည်သူမျှ မလုပ်ဆောင်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအဖြစ်မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လောက၌ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) တစ်ပါးတည်းသာ အပြည့်စုံဆုံး စာရိတ္တအဆင့်သို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အမှန်ပင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် လူသားတို့အနက် အကောင်းဆုံး နှိမ့်ချတတ်သူဖြစ်၏။
အစေခံကျွန်များနှင့်ပင် အတူတကွ စားသောက်တတ်၏။
ဈေးဝယ်ထွက်၏။ ပစ္စည်းများသယ်မရာ၌ ရှက်ရွံ့တွန့်ဆုတ်မနေတတ်ပါ။
ကြီးသူဖြစ်စေ၊ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်စေ တွေ့လျှင်တွေ့ချင်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ကပင် စတင်၍ နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ရှေ့မှောက်၌ မည်သည့်တံခါးကိုမျှမပိတ်၊ မည်သည့် အတားအဆီးမျှ မထားချေ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် အထူးထင်ရှားသော်လည်း မိမိအားတွေ့ဆုံလိုသူတိုင်းကိုအတွေ့ခံ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မြည်းစီးလေ့ရှိပြီး တောင်တက်ရာတွင် အများ၏နောက်မှသာလိုက်ပါ စီးနင်းလေ့ရှိ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သစ္စာရှိသူ၊ယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်ကျော်ကြားခဲ့၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မိမိလိုအင်ဆန္ဒကိုရှေ့တန်း တင်ပြောဆိုသူမဟုတ်။
သို့သာမက ထိုသို့ ပြောဆိုသူများနှင့် စကားကောင်း မဆိုသူများထံမှ ဖယ်ခွာနေလေ့ရှိ၏။
ရယ်မောစရာ တွေ့လျှင် ပြုံးရုံသာပြုံးတတ်၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ စကားများသည် တိုတောင်း နည်းပါးလှသော်လည်း တိကျပြတ်သား၏။
အပိုစကားများကို လည်း မပြောဆိုတတ်ပါ။
နှာချေသောအခါ လက် သို့မဟုတ် အဝတ်ဖြင့် ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်လျက် အသံကို ထိန်းချုပ်လေ့ရှိ၏။
ကိုယ်တော်တိုင် သမ်းဝေခြင်းမရှိသလို သူတစ်ပါးက ပြုလျှင်လည်း နှစ်သက်လေ့မရှိချေ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အဖန်ဆင်းခံများအနက် အကောင်းဆုံးသောစိတ်ထားရှင်နှင့် အကောင်းဆုံးသောဝိညာဉ်ရှင်ဖြစ်၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံမေးမြန်းလာသူတိုင်းကို ပြန်လည် အဖြေပေးလေ့ရှိ၏။
ကြပ်တည်းမှုဒုက္ခများကြားမှပင် ပေးကမ်း လှူဒါန်းလျက်ရှိခဲ့၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် လစ်ဟာ လိုအပ်ချက်တို့ကို ဖြည့်စွမ်းပေးသူဖြစ်၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မိန့်ကြားချက် ဩဝါဒများအပေါ် လူတို့က မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ခဲ့ကြ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် လူတို့အနက် အပေးအယူ အမှန်ကန်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။
သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ပြုမူကျင့်ဆောင်တတ်သူများအနက် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။
ရန်သူများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်လည်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အရဲရင့်ဆုံးသူဖြစ်ခဲ့ပါ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ပြီးပြည့်စုံသော စာရိတ္တရှင် ဖြစ်ပါလေ၏ ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အကောင်းဆုံးနှင့် အမြင့်မြတ်ဆုံး စာရိတ္တရှင်ဟူသည်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးလေပြီ။
သို့ရှိရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားမှာကား အဘယ်အရာပါနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လှုပ်ရှားပြုမူပြောဆိုကျင့်ကြံခြင်းမှန်သမျှ၌ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား နာခံ နောက်လိုက်မှုပြုရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မဖွယ်မရာကိစ္စများကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်၍ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ စာရိတ္တမွန်ကို စံနမူနာယူကြရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေညီနောင်များကိုလည်း ထိုစာရိတ္တကောင်းများ မွေးမြူတတ်လာရန် ဖိတ်ခေါ်ရပါမည်။
၄င်းတို့ လိုက်နာကျင့်သုံးလာ နိုင်အောင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ စံပြ စာရိတ္တမွန်ကို ရှင်းလင်း တင်ပြရန်အမှန်လိုအပ်ပါသည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ခံယူရရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဆိုလျှင် မဟာလူသား တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဘဝဖြစ်စဉ်တော်များအနက် အဆင့်မြင့်မားလှစွာသော သူ၏လူမှု ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စာရိတ္တမွန်များအား တစေ့တစောင်း လေ့လာ ကြည့်ကြပါစို့။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ထေရုပ္ပတ္တိတော်မှ စံပြ စာရိတ္တမွန်များ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အစေတော်၊ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အကောင်းဆုံးသော စာရိတ္တရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အိမ်တော်တွင် အမှုတော်ထမ်းခဲ့သူ သာဝကကြီး အနတ်စ်ဗင်န်မာလိက်(ရ)ပြောပြခဲ့သည်မှာ...
ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံတော်ပါး၌ (၁၀)နှစ်တိုင်တိုင် လုပ်ကျွေးပြုစု အမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ပါ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကျွန်ုပ်အား စိတ်တိုင်းမကျ သည့် (ဝါ) ဒေါသဖြစ်သည့် စကားတစ်လုံးတစ်လေမျှပင် မပြောဆိုခဲ့ဘူးပါ၊
ကျွန်ုပ်မည်သည့်အရာကိုဆောင်ရွက်သည် ဖြစ်စေ၊ သင်ဘာကြောင့် ဤအရာကို ပြုလုပ်ရပါသနည်းဟု မပြောဆိုခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်က တစ်စုံတစ်ရာကို မဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း ဤအရာကို အသင် အဘယ်ကြောင့် မပြုလုပ်ပါသနည်းဟု ပြောဆိုတော်မူခြင်းမရှိခဲ့ပါလေ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အမှန်ပင် အကောင်းဆုံး သော စာရိတ္တရှင် ဖြစ်တော်မူပါ၏။
ဆွဟီးဟ်ဗုခါရီကျမ်း (စဉ် - ၆၀၃၈ )
ဆွဟီးဟ်မွတ်စလင်မ်ကျမ်း (စဉ် - ၂၃၃၀ )
လက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားသည် မိမိ၏ အိမ်ရှင်/အလုပ်ရှင်အား မကောင်းပြောဆိုလေ့ရှိခြင်းမှာ သဘာဝ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအလုပ်ရှင်၏ ကြမ်းတမ်း ခက်ထန်မှုနှင့် နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အစေတော်မှာ သူ့သခင်ထံမှ အမျက်သင့်စကားတစ်ခွန်းမျှပင် မကြားခဲ့ဘူးပါ။ ၄င်းအပြင် ကိုယ်တော်သည် သူ့အား မည်သည့် အရာနှင့်မျှ ပြစ်တင်ခြင်းမရှိသလို မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ဆူပူမာန်မဲခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါဟုပင် ဆိုနေလေသည်။
ဤသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ စာရိတ္တမွန်ဖြစ်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်သည် အာအိရှဟ် သခင်မ(ရ)အား မေးမြန်းခဲ့၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အကျင့်စာရိတ္တတော်ကို ကျွန်ုပ်အား ပြောပြပါလော့။
အသင် ကုရ်အာန် ဖတ်ပါသလားဟုမေးရာ
ထိုအခါ သခင်မက -
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အကျင့်စာရိတ္တ သဘောသကန်သည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အတိုင်းပင် ဖြစ်တော်မူခဲ့၏ ဟု ပြောဆိုခဲ့လေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် ဖော်ပြထားသော စာရိတ္တရှင်တို့၏ သဏ္ဌာန်အတိုင်းပင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က ပြုမူဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ကုရ်အာန်တွင်ညွှန်ပြသမျှသော အကျင့်စရိုက်ကောင်းမှန်သမျှ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံတွင်တွေ့ရှိရပြီး ကုရ်အာန်တွင်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော အကျင့်စရိုက်ဆိုး ဟူသမျှ ကိုလည်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် စွန့်လွှတ်ကျောခိုင်းတော်မူပြီးဖြစ်ခဲ့၏။
အာအိရှဟ်သခင်မ(ရ)က ဆင့်ပြန်ပြောခဲ့၏။ ....
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မသတီဖွယ်ရာ☼မှ ကင်းစင်၏။
ရိုင်းပျမှုမရှိ။ ဈေးအတွင်း၌ပင် ဟစ်အော်ဆူညံမှုလည်း မပြု။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း မပြု။
၄င်းအစား ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြေဖျောက်ခြင်းကိုသာ ကျင့်သုံးတော်မူခဲ့ပါ၏။
မွတ်စနဒ် အဟ်မဒ်ကျမ်း (၆/၂၃၆ç၂၄၆)
☼ မသတီစရာဟူသည် ညစ်ပတ်ရုန့်ရင်းသည့်စကားပြောဆိုခြင်း၊ မည်သူ့ ရှေ့မှောက်မဆို အရှက်တရားမဲ့စွာ တမင်ရည်ရွယ် ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အာအိရှဟ်သခင်မ(ရ) ပြောဆိုသော တမန်တော်မြတ်(ဆွ)စာရိတ္တမွန်၏ သာဓကတစ်ရပ်ရှိသေး၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် သာသနာ့စစ်ပွဲများ ဆင်နွှဲနေစဉ်မှအပ မည်သူကိုမျှ မည်သည့်အရာနှင့်မျှ ရိုက်ပုတ် ထိခိုက်စေခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ထို့အတူ အစေခံကျွန်များနှင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ရိုက်နှက်ခြင်း အလျဉ်း မရှိခဲ့ချေ။
ဆွဟီးဟ်မွတ်စလင်မ်ကျမ်း (စဉ် - ၂၃၂၈)
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အကြောင်းကို အနတ်စ်(ရ)က ပြန်လည်ဆင့်ပြန်ပြောပြသည်မှာ -
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုတတ်သူ၊ ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုတတ်သူ၊ ကျိန်ဆဲလေ့ရှိသူမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနက်မှ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဆူပူလိုသောအခါ သူ့နဖူးကိုဖုံများဖြင့် လွှမ်းသွားပါစေ☼ဟုသာ ပြောခဲ့ပါ၏။
ဆွဟီးဟ်ဗုခါရီကျမ်း (စဉ် - ၆၀၃၁၊ ၆၀၄၆)
မွတ်စနဒ် အဟ်မဒ်ကျမ်း ( ၃/၁၂၆ç၁၅၈ )
☼ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် လုပ်ရပ်ဖြင့်မဆိုထားနှင့်၊ စကားဖြင့်ပင် သူတစ်ပါးအား ထိခိုက်စေသူ မဟုတ်ပါ။ လောကအပေါင်း၏ ကရုဏာရှင်အဖြစ်ပွင့်ပေါ်ခဲ့သူသာဖြစ်၏။ အထက်ပါစကားရပ်သည် လူတစ်ဦး ကိုကြိမ်း မောင်း ဆူပူလိုသောအခါ အရဗ်လူမျိုးစု အစဉ်အဆက်ဤကဲ့သို့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ရေရွတ်လေ့ရှိသည့် အသုံးအနှုံးတစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပေ၏။ တမင်ရည်ရွယ်လျက် အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် အသုံးပြုကြခြင်းကား မဟုတ်ချေ။
ရိုင်းပြကြမ်းတမ်းမှုများအပေါ် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ တုံ့ပြန်ပုံအချို့ကို လေ့လာကြည့်ပါလေ။
အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းသည့် အဝတ်အစားကို ဆင်မြန်းတော်မူထားသော တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အတူ
ကျွန်ုပ် လမ်းလျှောက်လာစဉ် ကိုယ်တော်အနီးသို့ အရဗ်ကျေး တောသား တစ်ဦးရောက်လာ၏။
၄င်းနောက် ထိုသူသည် ကိုယ်တော့် အင်္ကျီစကို ကျွန်ုပ် ကိုယ်တော် ပခုံးသားကို တွေ့ မြင်ရသည်အထိ
ထိုသူ၏ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင့်ဆွဲမှုကြောင့် ကုတ်ခြစ်မိသွားသည် ဟုထင်ရ၏။
ပြီးလျှင် ထိုသူက -
အို..မုဟမ္မဒ်၊ အသင်ကိုးကွယ်သော အလ္လာဟ်၏ ဓန စည်းစိမ်းများ၊ တစ်စုံတစ်ရာကို
ကျွန်ုပ်အားပေးကမ်းရန် အသင် အမိန့်ပေးလိုက်လေလော့ ဟု ပြောလေ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ထိုသူ့အား စေ့စေ့ကြည့်ကာ ရယ်မောတော်မူပြီးနောက်
ထိုသူ့အတွက် တစ်စုံတစ်ရာကို တောင်းဆိုပေးတော်မူခဲ့၏။
ဆွဟီးဟ်ဗုခါရီကျမ်း (စဉ် - ၆၀၈၈)
ဆွဟီးဟ်မွတ်စလင်မ်ကျမ်း (စဉ် - ၁၀၅၇)
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ဆောင်ရွက်တော်မူလေ့ရှိသည့်အတိုင်း ပစ္စည်းပစ္စယ အချို့ကို ခွဲဝေပေးတော်မူခဲ့၏။
ထိုအခါ အန်ဆွာရ်များအနက်တစ်ဦးက -
အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အား တိုင်တည်ကျိန်ဆိုပါ၏။
ဤခွဲဝေခြင်း၌ မုဟမ္မဒ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မျက်နှာတော်အရ ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်။
ဤဝေစုဝေပုံသည် အလ္လာဟ်အရှင့်မျက်နှာတော်အတွက်ရည်စူးဆောင်ရွက်ထားသည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုလေသည်။
အမှန်ပင် ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံ သွားရောက် ပြောပြမည်ဟု ဆိုလျက်
သာဝကတော်အချို့နှင့်အတူ ရှိနေသော တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံသွား၍ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လျှောက်တင်ခဲ့၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ မျက်နှာတော်သည် ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပေ၏။
ထို့အတွက် ငါမပြောမိပါလျှင် ကောင်းလေစွဟုပင် ကျွန်ုပ်ဆင်ခြင်မိပေသည်။
၄င်းနောက် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ -
တမန်တော်မူစာအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သနားတော်မူ ပါစေ။
ဧကန်စင်စစ် သူသည် ဤသည်ထက်ပင် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရ၏။
သို့တိုင်အောင် သူသည် သည်းခံခဲ့ရှာပေသည်}။
ဗုခါရီ( ၆၀၅၉ )၊
ဤဖြစ်စဉ်တို့က တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ခက်ခဲစဉ် စိတ်ရှည်မှု၊နုးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊သည်းခံမှုနှင့်လှပသောခွင့်လွှတ်မှုတို့ကို ဖော်ပြနေပေသည်။ ဤအရာများသည် အကျင့်စရိုက်ကောင်း စာရိတ္တကောင်းများပင် မဟုတ်ပါလော။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ချစ်ခင်မှုကို ရလိုပါလျှင်
အသင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ရယူလိုပါလျှင် သင်ကိုယ်တိုင်က စာရိတ္တကောင်းမွန်ရပေမည်။ အမှန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကောင်းမြတ်သော စာရိတ္တရှင် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးတော်မူပါသည်။
အအ်လာ ဗင်န် ကဆီးရ်က ပြောခဲ့၏။
ဧကန်အမှန် ကောင်းမြတ်သော အကျင့်စရိုက်အပြုအမူတို့သည် ကြီးကဲထွက်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က စီမံထားရှိပြီး ဖြစ်သည်။
အရှင်မြတ်သည် သူ၏ကျွန်ကို ချစ်ခင်တော်မူပါက ထိုသူအား စာရိတ္တကောင်းကို ချီးမြှင့်တော်မူ၏။
မကာရီမုလ် အခ်လာက် (စာ-၃၄)
ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော စာရိတ္တကို ကိုင်စွဲထားသူအဖို့ ကောင်းမြတ်ခြင်း မင်္ဂလာအဖြာဖြာသက်ရောက်ပြီး၊ အကျင့်စရိုက်ဆိုးသူအဖို့ (ပယ်ရှားခြင်း)ကျိန်စာ သက်ရောက်လာနိုင်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကောင်းမြတ်သော စာရိတ္တ၏ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ရှင်းပြတော်မူခဲ့သည်မှာ ... ကိယာမသ်နေ့၌ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျွန်များ ယူဆောင် လာမည့် အကောင်းဆုံးအရာမှာ စာရိတ္တမွန်ဖြစ်၏။မွတ်စလင်မ် တို့၏ မီဇာန်း (ချိန်ခွင်တော်)အတွင်း အလေးပင်ဆုံးအရာ၊ အချိန် စီးပိုးစေမည့်အရာမှာ စာရိတ္တကောင်းသာဖြစ်ပေသည်ဟူ၏။
မီဇာန်း အတွင်း အလေးချိန်အစီးဆုံးအရာမှာ စာရိတ္တမွန်ပင်ဖြစ်သည်။
အဗူဒါဝူးဒ် ကျမ်း (စဉ် - ၄၇၉၉ )
မွတ်စနဒ် အဟ်မဒ်ကျမ်း (၆/၄၄၆ç၄၄၈ )
နောက်ထပ် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် မိန့်တော်မူသည်မှာ...
မီဇာန်းအတွင်း စာရိတ္တမွန်ထက် လေးပင်သောအရာ ဟူသည် မရှိချေ။
ဤမဟာဆုလာဘ်ကြီးအတွက် ကောင်းမြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားထားရှိကြပါကုန်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အဆွေတော် သာဝကတော် အပေါင်းတို့သည် ဤအောင်ဆုမင်္ဂလာ အကျိုးခံစားနိုင်ရေးအတွက် အကောင်းမြတ်ဆုံး၊ အကျင့်စရိုက်ကို ကျင့်မူခဲ့ကြပေသည်။
အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် အုမရ်(ရ)က ပြောခဲ့၏။
ကုရိုက်ရ်ှတို့အနက် အကြင်နာဆုံးလူသား၊ အကောင်းဆုံး စာရိတ္တရှင်၊ အရှက်ကြောက်တတ်ဆုံးသူ (၃)ဦးရှိ၏။
အသင်သူတို့နှင့် စကားပြောဆိုပါလျှင် သူတို့သည် လိမ်ညာ ခြင်းမရှိ။
အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု သိစေခဲ့လျှင်လည်း သင့်အား လိမ်ညာသည်ဟု မစွပ်စွဲတတ်ချေ။
- အဗူဗကရ် ဆွစ်ဒီးက်၊
- အုဆ်မာန်း ဗင်န် အဖ္ဖါန်း နှင့် 
ပထမမြောက် အစ္စလာမ့် ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး
အဗူဗကရ် ဆွစ်ဒီးက်၏ စာရိတ္တမွန်
အဆ်ွဆွစ်ဒီးက်ဘွဲ့ရှင် အဗူဗကရ်(ရ)ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး သိရှိကြပါသည်။ သူသည် စံပြ စာရိတ္တရှင်များအနက် တစ်ဦး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ဖော်ပြပါအံ့။
ရဗီးအဟ်အတ်စ်လမီ(ရ)က အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြခဲ့ပါ၏။
ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား မကြာ မကြာ ခစား ပြုစုလေ့ရှိခဲ့၏။
တစ်နေ့တွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကျွန်ုပ်အားမြေယာတစ်ချို့ပေးခဲ့၏။
ထိုမြေနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော မြေယာတစ်ချို့ကို အဗူဗကရ်(ရ)ကိုလည်းပေးခဲ့၏။
ထို့နောက် ထိုမြေကွက်များ စပ်ကြားမှ အပင်များရှိ အသီးအခိုင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦး အငြင်းပွားခဲ့ကြလေသည်။
အဗူဗကရ်(ရ)က ဤသည်မှာ သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်နမိတ်အတွင်းမှ ဖြစ်သည်ဟုဆို၍
ကျွန်ုပ်ကလည်း ကျွန်ုပ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နယ်နမိတ်အတွင်းမှသာ ဖြစ်သည်ဟုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့၏။
ဤသို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးအကြား အငြင်းပွားစကားများဖြစ်လာပြီး
အဗူဗကရ်(ရ)က ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သည့် စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုမိခဲ့လေသည်။
၄င်းနောက် အဗူဗကရ်(ရ)သည် သူကျွန်ုပ်အားပြောဆိုခဲ့သည့် စကားအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခါ
အို... ရဗီးအဟ်၊ ကျွန်ုပ်အား တုံ့ပြန်အစားယူသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ထိုစကားအတိုင်း ပြန်လည်ပြောဆိုပါလေဟု ပြောလာရာ
ကျွန်ုပ်က ပြောဆိုမည်မဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်ခဲ့၏။
အဗူဗကရ်(ရ)မှ ဆက်၍ ကျွန်ုပ်အား ထပ်တူညီမျှစွာ ပြောဆိုတုံ့ပြန်ပါ သို့မပြုပါက
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံ ဤကိစ္စ ဖြေရှင်းစေရန် ကျွန်ုပ်သွားရောက်တင်ပြပါမည်} ဟုပြောပြန်ရာ
ထိုအခါ အဗူဗကရ်(ရ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံ သွားလေရာ ကျွန်ုပ်လည်း နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့၏။
ထိုစဉ် လူတစ်စုသည် ကျွန်ုပ်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အသင့်အား အဗူဗကရ်က ပြောဆိုခဲ့သည်အပေါ်
သင်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံ အဘယ်ကြောင့်သွားရပါသနည်းဟု ပြောကြလေ၏။
ကျွန်ုပ်သည် ထိုသူတို့အား ဤသို့ ရှင်လင်းပြောပြခဲ့၏။
ဤအဗူဗကရ်(ရ)ဟူသည် (ကုရ်အာန်-၉း၄၀လာ) ဂူအောင်း ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး အနက်မှတစ်ဦးဖြစ်သည်ကို အသင်တို့ မသိကြလေရော့သလား။
အဗူဗကရ်(ရ)သည် မွစ်လင်မ်တို့ လေးစားရိုသေရမည့် ဝါစဉ်မြင့်သူဖြစ်သည်။
သူ့ကို ဆန့်ကျင်ရန် အသင်တို့ ကျွန်ုပ်အား ကူညီခြင်းကို သူမတွေ့ မသိအောင် ဂရုစိုက်ကြကုန်။
သို့မဟုတ်က သူ၏ အမျက်ထွက်ပေမည်။
သို့ဖြစ်ပါမူ သူ၏အမျက်ကြောင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် လည်းအမျက်ထွက်တော်မူပေမည်။
သူတို့နှစ်ဦးက အမျက် ထွက်လျှင် အလ္လာဟ်အရှင့်အမျက်တော်ရှခြင်းခံရပေတော့မည်။
သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ် ရဗီးအဟ်မှာ ဖျက်ဆီးခံရချေတော့မည်ဖြစ်ပါ၏
ဤတွင် ထိုသူတို့က အသင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသနည်းဟုပြောရာ
ကျွန်ုပ်က အသင်တို့ အားလုံး အိမ်ပြန်ကြပါကုန်ဟုပြောခဲ့ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံသို့ လျှောက်ထားတင်ပြရန်သွားနေသူ အဗူဗကရ်(ရ)နောက် ကျွန်ုပ် ဆက်လိုက်သွားခဲ့သည်။
အဗူဗကရ်(ရ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံသို့ေ၇ာက်ရှိလေသော် ဖြစ်ပျက်သမျှကို ပြောဆို အသိပေးလျှောက်ထားလေသည်။
ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကျွန်ုပ်ဖက်သို့ လှည့်တော်မူ၍
အို...ရဗီးအဟ်၊ အသင်နှင့် အဗူဗကရ်တို့နှစ်ဦးအကြား မည်သည့်ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သနည်းဟု မေးတော်မူလေသည်။
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က ဤသို့ ဤနှယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဟု လျှောက်ထားပြီးနောက်
ပြီးသော် ကျွန်ုပ်၏ စကားအတိုင်း ကျွန်ုပ်ကို ပြန်ပြော၍ ပြန်လည်အစားယူပါဟု
သူက ပြောဆိုခဲ့ပါသည်ဟု တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ကောင်းလေပြီ။ လက်တုံ့ပြန်ခွင့်ရှိသော်လည်း တူညီသော တုံ့ပြန်မှုကို အသင်မပြုခဲ့။
အို-အဗူဗကရ်၊ အသင့်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ခွင့်လွှတ်တော် မူပါစေဟု ပြောဆိုလိုက်ခြင်းက
ပို၍ သင့်လျော်ပေသည်၊ အသင် ပြောဆိုအပ်ပေသည်ဟုမိန့်ကြားတော်မူလေ၏။
ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) သင်ကြားပေးသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်လည်း
အို- အဗူဗကရ်၊ အသင့်အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေဟု ပြောဆိုလိုက်လေရာ
အဗူဗကရ်(ရ)သည် အဝေးသို့ ငိုကြွေးထွက်ခွာသွားလေတော့၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဖြစ်ရပ်မှ အဗူဗကရ်(ရ)၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သတိပြုအပ်ပေသည်။ အဗူဗကရ်(ရ)သည် ရဗီးအဟ်(ရ) မနှစ်သက်သည့် စကားတစ်ခွန်းမျှဆိုခဲ့မိ၏။ ထိုစကားအတွက်လည်း ယူကျုံးမရ ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရှာ၏။
စာရိတ္တကောင်းရှိသူ မှန်သမျှအဖို့ မိမိ၏ မှားယွင်းမှုအတွက် ဝမ်းနည်းခံစားရလေ့ရှိပါ၏။ ရဗီးအဟ်(ရ)အား ပြန်လည်အစားယူစေရန် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်သည်ကား အဗူဗကရ်(ရ)၏ စာရိတ္တတရား ပြည့်စုံမှုပင်မဟုတ်ပါသလော။
ဒုတိယမြောက် အစ္စလာမ့် ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး
အုမရ် ဖွှာရူးက် ၏ စာရိတ္တမွန်
အမှန်နှင့်အမှားကို ခွဲခြားသိမြင်သူ (အလ်ဖွှာရူးက်) ဟု ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်ခံရသူမှာ သာဝကတော်ကြီး အုမရ် ဗင်န် ခသ်သွဗ်(ရ)ပင်ဖြစ်ပါ၏။ သူသည် သူ၏ ကတိသစ္စာ အပေါ် မယိမ်းမယိုင် ရပ်တည်သူ၊ ကတိတည်ကြည်သူဖြစ်၏။
တစ်ခါသော် ပါးရှန်းတို့၏ ခေါင်းဆောင် ဟုရ်မုဇါန်းသည် စစ်ရှုံးကာ အကျဉ်းသားအဖြစ် သမ္မတကြီး အုမရ်(ရ)ထံသို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ဤသူသည် အရဗ် မဟုတ်သူတို့၏ ခေါင်းဆောင်၊ ၄င်းပြင် ရန်သူ ဧကရာဇ်၏နောက်လိုက်လည်းဖြစ်၏ဟုလျှောက်ထားကာ သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)ထံသို့ ဆက်သခံရခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ထိုစစ်တရားခံအား အုမရ်(ရ)က -
အသင်၏ ယခု ဘဝနှင့်နောင်ဘဝအကျိုးငှာ ကျွန်ုပ်သည်အသင့်အားအစ္စလာမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်ဟုပြောဆိုသောအခါ
အို..သမ္မတကြီး၊ ကျွန်ုပ် ရပ်တည်နေသော သာသနာကိုသာ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏၊ အစ္စလာမ်ကို ကျွန်ုပ်ဆန္ဒမရှိပါဟု တုံ့ပြန်ပြောဆိုလေ၏။
သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)သည် ၄င်းစစ်တရားခံကို သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်၍ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချိန်တွင်
ကျွန်ုပ်ရေငတ်နေပါသဖြင့် ရေတစ်ခွက် သောက်ခွင့်ပြုပါဟု တောင်းဆိုသဖြင့်
ထိုစစ်တရားခံ ဟုရ်မုဇာန်းသည် ရေခွက်ကိုကိုင်၍
ဤရေကို သောက်သုံးပြီးသည့်တိုင် ကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်ခွင့်ပြုပါမည်လောဟုမေးရာ
သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)က သဘောတူလိုက်၏ ။
ဤတွင် ဟုရ်မုဇာန်းသည် ရေခွက်ကို အောက်သို့ ပစ်ချ လိုက်ပြီး
ကတိတည်ကြည်ခြင်းသည် တောက်ပ သောလင်းရောင်ခြည်တစ်ခုဖြစ်ပါ၏ဟုပြောလေ၏။
အသင် မှန်ရာကို ဆို၏၊
အသင့်အား အဆုံးစီရင်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ ဤကိစ္စဖြင့် အသင့်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီ၊
ဓါးများကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ကြကုန်ဟု ပြောဆိုအမိန့်ပေးလေ၏။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ ကိုးကွယ်ခံထိုက်ရာ အလျဉ်းမရှိကြောင်း၊
စေတမန်တော်သည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ထံတော်မှ မှန်ကန်ခြင်း နှင့်အတူရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း
အသင်အစ္စလာမ်ကို လက်ခံလိုက်သည်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့်နှောင့်နှေးနေခဲ့ရပါသနည်း ။
ကျွန်ုပ်ဓားကိုကြောက်၍ အစ္စလာမ်ကို လက်ခံသည်ဟု အသင်တို့၏ ထင်မြင်ခြင်းကို မခံချင်ပါ။
ပါးရှန်းသားတို့သည် ထက်မြက်လှပေစွတကား၊ သို့ကြောင့် ဤသို့စွမ်းအားကြီးမားနေခြင်းတည်း။
၄င်းနောက် ဟုရ်မုဇာန်းအား ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံ ဂုဏ်ပြုကြရန်အမိန့်ပေးခဲ့၏။ ပြီးလျှင် သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)သည် ပါးရှန်းတို့နှင့် ခင်းသော စစ်ပွဲကြီးအတွက် ဟုရ်မုဇာန်းအား စစ်အကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်လေသည်။
အုမရ်(ရ)သည် ပြောသည့်အတိုင်းပင် လုပ်၏။ အပြောင်းအလဲ မလုပ်။ သူ၏ ကတိကို တည်ကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော မုအ်မင်န်၏ စာရိတ္တတရားပင် မဟုတ်ပြီလော။
ဤဖြစ်စဉ်မှသည် အုမရ်ဖါရုးက်(ရ)ပိုဆိုင် ထားသော စာရိတ္တမွန်အား ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ မြင်ကြရပြီတည်း။
တတိယမြောက် အစ္စလာမ့် ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး
အုဆ်မာန် ဇွန်နုရိုင်းန်၏ စာရိတ္တမွန်
အုဆ်မာန် ဗင်န် အဖ္ဖါန်း(ရ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ သမီးတော်နှစ်ပါးနှင့် လက်ဆက်ခဲ့၏။ ပထမဇနီးသည် သမီးတော် ရုကိုင်ယဟ်(ရ)ဖြစ်၏။ သူမ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ညီမဖြစ်သူ သမီးတော် အုမ္မု ကုလ်ဆူးမ်(ရ)နှင့် ဒုတိယ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့၏။ သို့ဖြစ်ရာ သူ့အား အလင်းရောင်နှစ်ခု၏ပိုင်ရှင် (ဇွန်နုရိုင်းန်)ဟု ဘွဲ့နာမဖြင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ၏။
အုဆ်မာန်(ရ)ထံ၌ အစေအပါးတစ်ဦးရှိခဲ့၏။ တစ်နေ့ ၄င်းအစေခံအမျိုးသမီးအား အသင့် နားရွက်ကို ငါဆွဲခဲ့ဖူးသည် ဖြစ်ရာပြန်လည်အစားယူလေလော့ဟု ပြောသဖြင့် ထိုအစေခံမက အုဆ်မာန်(ရ)၏ နားရွက်ကိုဆွဲလေသည်။ ဤတွင် အုဆ်မာန်(ရ)က ပိုပြင်းထန်စွာ ဆွဲပါ။ ဤဘဝ၌ တုံ့ပြန် အစားပေးလိုက်ရသည်မှာ ကောင်းလေစွ၊ နောင်ဘဝ၌ ကလဲ့စားဟူသည် မရှိတော၍ ဖြစ်သည်ဟု ပြော၏။
အုဆ်မာန်(ရ)သည်ညဉ့်အချိန်တွင် ဝုဒွူပြုရန် ရေကို ကိုယ်တိုင်ယူငင်သယ်ဆောင်လေ့ရှိ၏။ လူအများက အစေခံများကို အဘယ်ကြောင့်မခိုင်းပါသနည်းဟုမေးရာ မခိုင်းပါ။ ညဉ့်သည် သူတို့ အတွက် နားနေချိန်ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖြေကြားလေသည်။
ဂျန္နသ်နှင့်ထိုက်တန်သူ ဇွန်နုရိုင်းန်၏ ကရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လေးစားမှုဟူသော စာရိတ္တမှတ်တိုင်တို့ကို တွေ့ မြင်ကြရပါမည်။
စတုထ္တမြောက် အစ္စလာမ့် ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး
အလီ ဗင်န် အဗူတွာလိဗ်၏ စာရိတ္တမွန်
အလီ(ရ)သည် သုခဘုံသား-ဂျန္နသီဟု၊ အုဆ်မာန်(ရ)ကဲ့သို့ပင် သတင်းကောင်းပေးခံရသူဖြစ်သည်။ အားနည်းသူကို ဖေးမကူညီတတ်ခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများနှင့် လက်ရည်တစ်ပြင်စည်း ရောနှော ဆက်ဆံတတ်ခြင်း၊ ရိုကျိုးနှိမ့်ချခြင်းနှင့် သိမ်မွေ့ခြင်းတို့သည် သူ၏ စာရိတ္တကောင်းများဖြစ်လေ၏။
တစ်နေ့တွင် သူ၏ အစေခံလူငယ်ကိုခေါ်ရာ ၄င်းက မထူးခဲ့။
(၃)ကြိမ်ခေါ်ဆိုသော်လည်း တုံ့ပြန်သံ မကြားရသဖြင့် ရှာကြည့်ရာလဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့သဖြင့်
အို- သူငယ်၊ ငါခေါ်သည်ကို မကြားပါ သလောဟု မေး၏။
လုလင်ပျိုက ကြားသိပါကြောင်း ဖြေကြားရာ
သို့ဆိုက ဘာကြောင့်ပြန်မထူးသနည်းဟု မေးသော်
အသင် ကျွန်ုပ်အား အပြစ်ဒဏ်ခတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်၏။
သို့အတွက် ကျွန်ုပ်ဆက်၍ လဲလျောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုလုလင်ကပြန်ဖြေသည်။
အလ္လာဟ်အရှင့် မျက်နှာတော်ဖြင့် သင့်ကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီ။
အသင်သွားလိုရာသွားလေရော့ဟု အလီ(ရ)က ပြောလိုက်လေတော့၏။
အလီ(ရ)သည် ဒေါသကို အမြဲထိန်းသိမ်းနိုင်သူဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၏။ စိတ်ထားမြင့်မြတ်၍ သဘောထားပြည့်ဝ၏။ ဤဖော်ပြချက်များမှ သင်ခန်းစာများ ယူတတ်လျှင် ရကြပေမည်။
သူတော်စင် သာဝကတို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရှေ့ဆောင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်များပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးဆက်သစ် မွတ်စ်လင်မ် များအနေနှင့် သူတို့၏ ဖြစ်စဉ်များကို ကျနစွာ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး သူတို့၏လမ်းကြောင်းလိုက်ကြရန်၊ သူတို့ကဲ့သို့ လုပ်ရပ်ကောင်းနိုင်ရန် အရေးကြီးလှပေသည်။ သူတို့သည် ကောင်းမြတ်လှသော စာရိတ္တများ ရှိခဲ့ကြသည်။သူတို့သည် သူတို့၏ မိတ်ဆွေများထက် သူတို့၏ ရန်သူများအကြား၌ ပို၍ထင်ရှားကျော်စောခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ အပြုအမူကောင်းတို့ကြောင့် လူတို့က ချစ်ခင်ဂုဏ်ပေးခဲ့ကြပေသည်။
ခလီဖွှဟ်သမ္မတကြီး အုမရ် ဗင်န် ခသ်သွဗ်(ရ)သည် ဒီနာရ်ဒင်္ဂါး(၄၀ဝ)ကို အိတ်တစ်လုံးတွင်းထည့်ကာ မင်းစေတစ်ဦးကို ခေါ်ယူ၍
ဤသည်ကို သာဝကကြီး အဗူအုဗိုင်ဒဟ် ဗင်န် ဂျရ်ရာဟ်(ရ)ထံ သွားပေးလိုက်။
ပြီးလျှင် သူဘာလုပ်သည်ကိုခေတ္တ စောင့်ကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့ဟု ပြောဆိုစေလွှတ်လိုက်လေ၏။
ထိုမင်းစေသည် သာဝကကြီး အဗူအုဗိုင်ဒဟ်(ရ)ထံ သွားရောက်ကာ
အသင်လိုအပ်သည့်နေရာ၌အသုံးပြုရန်အတွက် ဤငွေအိတ်ကို ခလီဖွှဟ်သမ္မတကြီးက ပေးခိုင်းလိုက်ပါသည်ဟု ပြောဆိုပေးအပ်လေရာ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အုမရ်အား ကရုဏာဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါစေဟု ပြောဆိုပြီး၎င်း၏အိမ်စေကိုခေါ်ယူ၍
ဤ၍ ဤမျှသည် ဤသူ့အဖို့၊ ထိုရွေ့ထိုမျှသည် မည်သူ မည်ဝါအဖို့စသဖြင့် မှာကြားပေးပို့စေလေ၏။
ထိုအခါ မင်းစေသည်လည်း ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး အုမရ်(ရ)ထံ ပြန်လာ၍ အကြောင်းစုံကို အစီရင်ခံတင်ပြလေ၏။
ခလီဖွှဟ် သမ္မတကြီး အုမရ်(ရ)သည် အလားတူ ပမာဏကိုသာဝကကြီးမုအာဇ်ဗင်န်ဂျဗလ်(ရ)ထံ ပေးပို့စေပြန်၏။
မင်းစေသည် အထက်ပါအတိုင်းပြောကာ ပေးအပ်ပြီး မုအာဇ်(ရ)သည်လည်း အဗူအုဗိုင်ဒဟ်(ရ)အတိုင်း၊ အလားတူစွာပင် ဆောင်ရွက်လေရာ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကျွန်မတို့အား ပေးကမ်း ချီးမြှင့်တော်မူပါ၏။
သို့ပါသော်လည်း အိတ်ထဲ၌ ဒင်္ဂါး(၂)ပြားသာ ကျန်ပါတော့သည်ဟုဆိုလေ၏။
ထိုအခါ မုအာဇ်(ရ)သည် ထိုဒင်္ဂါး(၂)ပြားအား ထိုသူမကိုပင် ပေးကမ်းလိုက်လေတော့သည်။
မင်းစေသည်လည်း ခလီဖွှဟ်သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)ထံ ပြန်လာ၍ အလုံးစုံကို ပြန်လည်အစီရင်ခံလေ၏။
ခလီဖွှဟ်သမ္မတကြီးအုမရ်(ရ)သည် ကျေနပ်ပီတိဖြင့် -
သူတို့သည် ဧကန်ပင် ညီနောင် ပီသကြသူများဖြစ်ပါ၏ဟု ပြောဆိုခဲ့လေသတည်း။
အိဗ်နု အုမရ်(ရ)ကလည်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ဤသို့ပြောပြခဲ့၏။
ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဆွေသဟာ သာဝကတစ်ပါးထံ သိုးတစ်ကောင် လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့ခဲ့၏။
ထိုသာဝကကြီးက မည်သူမည်ဝါသည် ကျွန်ုပ်ထက်ကို ပို၍ လိုအပ် နေသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆို၍ နောက် သာဝကတစ်ပါးထံ စေလွှတ်လိုက်၏။
နောက် သာဝကထံရောက်သောအခါတွင်လည်း သူ့ထက် ပိုလိုအပ်သည်ထင်သော နောက်ထပ်တစ်ဦးထံ ထပ်မံပေးပို့စေပြန်၏။
ဤသို့ တစ်ဦးမှ တစ်ဦး ဆင့်၍ ဆင့်၍ ညွှန်လိုက်သည်မှာ ပထမဦးဆုံး သာဝကထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
ထိုလက်ဆောင်သည် သာဝက(၇)ပါးအကြား လှည့်ပတ်ခဲ့ရပြီး ၄င်းတို့အားလုံး တူညီသော စကားတစ်ခွန်းကိုသာ ပြောဆိုခဲ့ပါ၏။
ယင်းမှာ... မည်သူမည်ဝါသည် ကျွန်ုပ်ထက်ကို ပို၍ လိုအပ်နေသူ ဖြစ်ပါ၏ဟူသတည်း။
မုအာဝီယဟ် ဗင်န် အဗီစုဖ်ယာန်း(ရ)သည် မုအ်မင်န်တို့၏ မိခင်မွန် အာအိရှဟ်(ရ)သခင်မထံသို့ ဒိရ်ဟမ်ဒင်္ဂါး ရှစ်သောင်းကို ပေးပို့စေခဲ့၏။
ထိုစဉ် သခင်မသည် ဟောင်းနွမ်းသော အဝတ်ဝတ်ဆင်ထားလျက်၊ဆွိယာမ် ဥပုသ် စောင့်ထိန်းထားလျက် ရှိ၏။
သခင်မသည် ၄င်းဒိရ်ဟမ်ဒင်္ဂါးများကို ရလျှင် ရခြင်း မရှိဆင်းရဲ သူများ၊ အတိဒုက္ခရောက်နေသူများ အစရှိသဖြင့်
လိုအပ်နေသူများထံသို့ မဆိုင်းမတွလျင်မြန်စွာပင် ခွဲဝေပေးကမ်းလိုက်လေရာ ဒင်္ဂါး တစ်ပြား တစ်ချပ်မျှပင် မကျန်ရစ်ပေ။
ဤတွင်သခင်မ၏ အပါးတော်မြဲအလုပ်ကျွေးပြုသူ အုမ္မု ဇရ်ရဟ်ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
သခင်မကြီး ယခု ဝါလွှတ်၊ဝါဖြေဖို့် အသားစလေး ဝယ်ယူနိုင်ရန် အတွက်
ဒိရ်ဟမ် ဒင်္ဂါး တစ်ပြားမျှပင် ချန်ရစ်မထားပါပြီလော။
ဤဖြစ်ရပ်များမှ အသင်တို့ ဘာကို အမိအရ ရယူကြမည်နည်း။
စရိုက်ကောင်းဟူသည် မွတ်စလင်မ် အစစ်အမှန်တို့၏ အရည်အသွေးတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ စရိုက်ဆိုးမှာမူ မိုက်မဲဆိုးသွမ်းသူတို့၏ အရည်အချင်းဖြစ်ပေ၏ ။
တစ်ခါက လူမိုက်တစ်ဦးသည် မြင့်မြတ်သူတစ်ဦးအား မကြားဝံ့ မနာသာ ဆဲဆိုစော်ကား၏။ သို့ရာတွင် မြင့်မြတ်သူက လူမိုက်ကို ဂရုမပြုသလို မည်သည့် တုံ့ပြန်မှုကိုမျှလည်း မပြုလုပ်ခဲ့။
ထိုမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပြခဲ့သည်မှာ -
လူမိုက်လူဆိုးတို့က ပြောဆိုလာခဲ့လျှင် အရေးမလုပ်လေနှင့်။
သူတို့ကို တုံ့ပြန်ခြင်းထက် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းက ပို၍ ထိရောက်ပေသည်ဟူ၏ ။
ဆိုးသွမ်းမှုကို ရပ်တန့်စေရန်နှင့် ရမ်းကားမှုကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆုံးမရန် အဘယ်ကြောင့်မတုံ့ပြန်ရခြင်းကို လူတစ်ဦးက မေးမြန်းလာရာ ထိုမြင့်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်က ဤသို့ရှင်းပြခဲ့၏။
- တကယ်လို့ ခွေးတစ်ကောင်က သင့်ကို လာကိုက်ရင် သင်ကရော ခွေးကို ပြန်ကိုက်မှာလား။
- ဒါဆိုရင် နွားထီးတစ်ကောင်က သင့်ကို လာဝှေ့ရင် သင်ကလည်း နွားကို ပြန်ဝှေ့ပစ်မှာဘဲလား။
လူမိုက်တွေဆီမှာ စရိုက်ဆိုးတွေရှိကြတယ်။ အမှန်တော့ သူတို့ဟာ ယုတ်မာမှုနဲ့ မိုက်မဲမှုဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ စရိုက် သဘာဝတွေကို လိုက်ပြီး ဝေမျှပေးနေတဲ့ သူတွေဘဲ ဆိုတာ သင်မှတ်ထားလိုက်ပါ။
မေးမြန်းသူသည် ကျေနပ်စွာဖြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုလျက် ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်။
- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူသားတို့အပေါ် လက်ဆောင်တစ်ခုကို မချီးမြှင့်ခဲ့ပါလျှင် . . .
- အသိပညာ အလိမ္မာနှင့် စာရိတ္တမွန်ကို ပိုကောင်း၊ ပိုမြတ်၊ ပို၍ မသာစေခဲ့ပါလျှင် . . .
- နုပျိုသောဘဝ၌ ဤတန်ဖိုးများ ဆုံးရှုံးသွားပါလျှင် . . .
- လူဖြစ်လည်း ရှုံး၊ ဘဝ ရှုံး၊ လုံးလုံး အရှုံးသာလျှင်တည်း ။
စရိုက်ကောင်း၏ တန်ဖိုးမြင့်မားမှုနှင့် စရိုက်ဆိုး၏ အကျည်းတန်းမှုတို့ကို ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ကြပါစေ ။
စရိုက်ဆိုးသူကို အထင်သေး ရွံမုန်းတတ်ကြပါသည်
ပညာရှင်တစ်ပါး သင်ခန်းစာပို့ချနေစဉ် လူမိုက်လူသွမ်း တစ်ဦးက ပမာမခန့်ပြောဆိုနှောင့်ယှက်လေ၏။ ပညာရှင်သည် ထိုသူအား ဂရုမစိုက်၊ ထိုသူအပြောကိုလည်း လွှတ်ထားလေ၏။ သူ့တပည့်များကိုပင်မူ ၄င်းအား မတုံ့ပြန်ကြရန် တားမြစ်ထား၏။ သင်ကြားပို့ချမှုပြီးဆုံး၍ အိမ်သို့ပြန်ရာ ထိုလူမိုက်က လိုက်၍ နှောင့်ယှက်မြဲပြု၏။
အိမ်တံခါးဝသို့ရောက်သော် ပညာရှင်က ထိုလူသွမ်းအား ဤသို့ဆုံးမခဲ့၏။
ဤသည် ကျွန်ုပ်၏ အိမ်ဖြစ်သည်။
အသင်ပြောစရာ ရှိသေးပါကလည်း ဤနေရာ၌ ပြီးဆုံးသည်အထိ ပြောထုတ်လော့။
သို့မှသာ ဤသည်နှင့် သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံး အသင်၏ စိတ်ဝိညာဉ်မှ ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မည်။
ထိုအခါ ထိုလူမိုက်သည် ရှက်ရွံ့သိက္ခာကျလျက် လှည့် ပြန်သွားလေ၏။
ဇိုင်နုလ်အာဗီဒီးန်ဗင်န်ဟုစိုင်န်ဗင်န်အလီသည် ဗလီကျာင်းတော်သို့သွားရာလမ်းတွင် လူ့တေလေအုပ်စုမှတစ်ဦးသောသူက ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာပင် ဆဲဆိုလေ၏။ ဇိုင်နုလ် အာဗီဒီးန်၏ တပည့်သားများက ထိုသူ့အား ရိုက်နှက်ကြမည်ပြုစဉ် ဇိုင်နုလ်အာဗီဒီးန်က သူ့အား မထိကြနှင့်ဟုတားမြစ်လိုက်၏။ ၄င်းနောက် ထိုသူယုတ်ထံသွား၍ ဤအိတ်ကို ယူလိုက်ချေဟုဆိုကာ ဒိရ်ဟမ် တစ်ထောင် ပါသောအိတ်ကို ပေးလိုက်၏။ ဆက်လက်၍ ဇိုင်နုလ်အာဗီဒီးန်ကဤသို့ပြောဆိုခဲ့လေ၏။ ငါတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို မနာခံသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ထိုသူနှင့် ပတ်သက်၍ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ကို နာခံခြင်းဖြင့် ငါတို့က အရောင်းအဝယ် လုပ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်၏။
ထိုသူသည် သိက္ခာမဲ့ အရှက်ရစွာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလျက် ထွက်ခွာသွားတော့၏။
သို့ဖြစ်လေရာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမြတ်သည့် စာရိတ္တရှင်ကို တွေ့ရှိရပါက လေးစား ချီးမြှောက် ချစ်ခင်ရပေမည်။ အလားတူ စာရိတ္တချို့ယွင်းသူကို တွေ့ရပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အထင်သေးရွံ့ရှာကြမည်သာ။
အများကလေးစားခြင်းခံရသူနှင့် အများကရွံမုန်းခြင်းခံရသူ မည်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်လိုကြပါသနည်း။
မွတ်စလင်မ်ကောင်းတစ်ဦး၏ အရည်အချင်းတစ်ရပ်မှာ မိမိဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။
မွတ်စလင်မ်တို့၏ခေါင်းဆောင် ခလီဖွှဟ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော အုမရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ်သည် တစ်ညဉ့်တွင် သူ၏ကိုယ်ရံတော်များနှင့်အတူ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် အတွင်းသို့ ဝင်လာခဲ့၏။ မှောင်မှောင်နှင့် မဲမဲဖြစ်နေသဖြင့် အိပ်ပျော်နေသူတစ်ဦးအနီးဖြတ်လျှောက်စဉ် ထိုသူအား ခလုတ်တိုက်မိခဲ့၏။
ထိုသူက ဦးခေါင်းကြွ၍ -
အုမရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ်ကလည်း -
ထိုအခါ ကိုယ်ရံတော်များက ထိုသူ့ကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရန်ပြင်သော်
အုမရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ်က -
သူက အသင်ရူးနေသလား ဟုမေးမြန်းပြီး ကျွန်ုပ်က မရူးပါဟုပြောကြားလိုက်သော ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါ၏ဟုပြောဆို တားမြစ်လိုက်လေ၏။
ဤဖြစ်စဉ်တွင် ခလီဖွှာ အုမရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ်သည် သူ့ဒေါသကို မည်သို့ ညင်သာစွာ ထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်နိုင်ပေသည်။
ကောင်းရာဆိုတတ်သူ ကောင်းရာ ကြားရ၏
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိ ကောင်းမြတ်သော စကားရပ်များဖြင့်သာ တန်ဆာဆင်အပ်ပါသည်။ အလိုရှိရာသူသည် ကောင်းမွန်သော စကားကိုသာကြားရပါလိမ့်မည်။ မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မိန့်တော်မူထားပါသည်။
ကောင်းမြတ်သော စကားများဖြင့် လူတို့အား ကောင်းမွန်စွာ ပြောကြားပါလေ။ (ကုရ်အာန်-၂း၈၃)
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာရိတ္တမွန်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါကို ရလိုပါလျှင် စကားကောင်းကိုသာ ဆိုတတ်ရမည် ဖြစ်ပါ၏ ။ အကြောင်းတစ်ရပ်ကို ဥပမေယျပြုတင်ပြပါမည်။
ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် သစ်ပင်များအကြား လွတ်လပ် စွာဆော့ကစားနိုင်ရန်အတွက်တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲသို့သွားလေ၏။ ကျောင်းမှသင်ပေးလိုက်သော တေးသီချင်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ ဟစ်ကြွေးသီဆိုနေလေ၏။ တစ်ခဏအကြာ အဝေးတစ်နေရာရာမှ တစ်စုံ တစ်ဦးက သူ့အားအသံပြုသလိုကြားရလေ၏။ ထိုတစ်စုံတစ်ဦးက သူဆိုသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုနေ၏။
ကလေးက တစ်ဖန် -
အသင် ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောပါဟူ၍ပင် အသံပြန်ပေးလေ၏။
ဤတွင် ကလေးငယ်သည် တစ်စုံတစ်ဦးက သူ့အား နောက်ပြောင်နေသည်ဟု ထင်မှတ်ပြီး -
အသင်သည် စုတ်ပြတ် လွန်းသည်ဟုပြောလေရာ
အသင်သည် စုတ်ပြတ် လွန်းသည်ဟုပြန်ပြောလေ၏။
ထိုအခါ ကလေးငယ်သည်စိတ်တို ဒေါသထွက်ကာ သစ်ပင်တစ်ပင်မှ အကိုင်းတစ်ကိုင်း ချိုးယူ၍ ထိုသူ့ ကိုရိုက်ရန်လိုက်ရှာပါလေ၏။ ခြေကုန်လက်ပန်းကျသည့်တိုင် မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့ခဲ့ချေ။သို့နှင့် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ဒေါသ ဖြစ်နေသော ထိုကလေးကို သူ၏မိခင်က မေးမြန်းသဖြင့်-
တောအတွင်းမှ ကောင်လေးတစ်ယောက်သည် ကျွန်တော်ပြော သမျှအထပ်ထပ်လိုက်ပြောပြီးနောင်ပြောင်နေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော် ရှာဖွေသော်လည်း သူ့အား ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဟုပြောပြလေ၏။
အို ... ချစ်သား၊
ထိုနေရာ၌ မည်သူမျှ မရှိပါ။
အသင့်အသံ၏ ပဲ့တင်သံကို အသင်ပြန်ကြားနေရခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပေသည်။
အသင်သည် ကောင်းမြတ်ရာကို ဆိုခဲ့ပါလျှင် ကောင်းရာကိုသာ ပြန်ကြားရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှုတ်လျာကို စကားကောင်းများနှင့်သာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါစေလေ၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ချိုမြိန်သော စကားရပ်များ ပြန်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းသော်ကား ကောင်းမြတ်သောစကားသည် ကောင်းမြတ်သော စာရိတ္တ အနက်မှသာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တည်း ။
လူငယ်တစ်ဦးက ပြောသည့် စာရိတ္တမွန်
အဟ်နဖ် ဗင်န် ကိုင်းစ်၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးမှုအစုအဝေး၌ မပျက်မကွက်ပါဝင်နေသော လူငယ်တစ်ဦး ရှိခဲ့၏။ အဟ်နမ်သည် ထိုလူငယ်အား အလွန် သဘောကျလျက် တစ်နေ့တွင် ထိုလူငယ်အား ဤသို့ မေးမြန်းခဲ့၏။
အို-သူငယ်၊ အသင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ အဘယ်အရာများဖြင့် အလှတန်ဆာဆင်ထားပါသနည်း။
ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောလျှင် မှန်ရာကိုသာ ဆိုပါ၏၊
ကတိကဝတ်ပြုလျှင် တည်ကြည်စွာ ထိန်းသိမ်း၏ ။
ယုံကြည်စွာ အပ်နှံခြင်းခံရလျှင် မည်သည့်အခါမျှအလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ပါဟုပြန်လည်ဖြေကြား၏။
ထိုအခါအဟ်နမ်သည် ဤသို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါ၏။
ဤသည်ပင် စာရိတ္တမွန်၏ ကောင်းခြင်းတရား စင်စစ်တည်း။
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကောင်းမြတ်သော စရိုက်လက္ခဏာရှိကြရပေသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကောင်းမြတ်သည့် စာရိတ္တကို ပြဋ္ဌာန်းတော်မူထားပါသည်။
- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စကား (ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်)ကို လက်ခံ နာယူခြင်း၊
- ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်မှ ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်း၊
- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တားမြစ်တော်မူထားသည့် အရာများကို ဝေးစွာ ကြဉ်ရှောင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာရိတ္တမွန်များမှာ...
- ရမဒွါန်လမြတ်၌ ဆွိယာမ် ဥပုသ် စောင့်ထိန်းခြင်း၊
- ဇကာသ် ဒါနပေးခြင်း၊
- တတ်စွမ်းနိုင်သူများအဖို့ ဟဂ်ျပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါ၏။
- လိုအပ်သော အကူအညီကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းထံမှသာလျှင် တိုင်တည် တောင်းခံခြင်း၊
- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းကိုသာလျှင် မှီခို အားထားခြင်း၊
- လိုအပ်သောအရာကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းထံ ဆုမွန်တောင်းခံခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရိတ္တမွန်
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အပေါ် အကောင်းဆုံး ဆက်ဆံမှုဖြင့် စာရိတ္တမွန်ကို ဖော်ပြကြရပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ နည်းစနစ်ဓလေ့တော်အတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ကြရပါမည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် သူ၏ စာရိတ္တမွန်ကို နှလုံးသားနှင့်အမျှ ချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားကြရပါမည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စံနမူနာပြ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် မဟာအာစရိယ ဖြစ်ပါ၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အမည်နာမနှင့် အကြောင်းအရာကို ကြားနာရသည့်အခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်တော်မူသည့်အတိုင်း
အစဉ်အမြဲ ဆွလဝါသ်၊ စလာမ်ဆက်သကြရပါမည်။
မိဘနှစ်ပါးနှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရိတ္တမွန်
မွတ်စလင်မ်တို့သည် မိဘနှစ်ပါးအပေါ် ကောင်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် စာရိတ္တမွန်ကို ဖော်ပြကြရပေသည်။
- မိဘနှစ်ပါး၏ စကားကို ကောင်းစွာ နားထောင်ပြီး မိဘနှစ်ပါး၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။
- မိဘနှစ်ပါး အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာလျှင် ၄င်းတို့အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ရပါမည်။
- မိဘနှစ်ပါးအနက် တစ်ဦးဦးက ခေါ်ဆိုလျှင် တုံ့ပြန် ဖြေဆို၍ရိုသေစွာ အနီးသို့သွားရပါမည်။ မိဘနှစ်ပါး၏ နောက်မှ လမ်းလျှောက်ရပါမည်။
- မိဘနှစ်ပါးအား ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံရပါမည်။ ဒေါသဖြင့် ဆူပူငေါက်ငမ်းခြင်းမပြုရပါ။
- မိဘနှစ်ပါးအား အမည်နာမတပ်၍ ခေါ်ဝေါံ်ခြင်း မပြုရပါ။
- ဒုအာဆုမွန်တောင်းခံရာတွင်မိဘနှစ်ပါးအတွက်ပါ ထည့်သွင်းတောင်းဆိုရပေမည်။
- မိဘနှစ်ပါး၏ သားချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပါမည်။
အိမ်နီးချင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရိတ္တမွန်
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် အိမ်နီးချင်းများနှင့် ကောင်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် စာရိတ္တမွန်ကို ဖော်ပြကြရပါသည်။
- အိမ်နီးချင်းများ၏ ကောင်းသောလုပ်ငန်းများ၌ အတူတကွ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- အိမ်နီးချင်း တစ်ဦးဦးက အကူအညီတောင်းပါက တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီပေးခြင်း ။
- အိမ်နီးချင်း တစ်ဦးဦး နာမကျန်းပါလျှင် သွားရောက် ကြည့်ရှုမေးမြန်းအားပေးခြင်းနှင့်် ကျန်းမာလာစေရန် ဆုမွန်တောင်း ပေးခြင်း ။
- အိမ်နီးချင်း၏ သတင်းကောင်းနှင့် အောင်မြင် တိုးတက်မှု များအပေါ် မိမိ၏ဝမ်းမြောက်မှုကိုဖော်ပြခြင်း။
- ဘေးဒုက္ခဆိုးကြုံတွေ့ရသူ အိမ်နီးချင်းအား မိမိ၏ ဝမ်းနည်းမှုကို ဖော်ပြပြီး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အားပေးခြင်း။
- မိမိကြောင့် အိမ်နီးချင်း တစ်ဦးဦးမည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာ မှုကိုမျှမဖြစ်စေခြင်း၊ ၄င်းသည် မေတ္တာနှင့် ကိုယ်ချင်းစာ တရားဖြစ်သည်။
- မွတ်စ်လင်မ်အိမ်နီးချင်းသေဆုံးလျှင် ၄င်း၏ ဈာပန ကိစ္စများ၌ပါဝင်ခြင်းနှင့်သေသူအတွက် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ထံ ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းခံဆုမွန်ပြုပေးခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ အိမ်နီးချင်းဝတ္တရားတို့မှာ ကြီးမား လေးလံလှသည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဟု မယူဆပါလေနှင့် ။
ငါ့ထံ ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရာအီးလ်(အ)ရောက်တိုင်း
အိမ်နီးချင်းများအပေါ် ကောင်းစွာကျေးဇူးပြု ဆက်ဆံရန် မှာကြားပါများသဖြင့်
တစ်ချိန်ချိန်တွင် အိမ်နီးချင်း များသည် အမွေဆိုင်များပင်ဖြစ်သွားလေတော့မလားဟုပင်
ဆင့်ပြန်သူ - မိခင်မွန် အာအိရှာဟ်(ရ) ၊
သိရ်မိဇီရ်ဟဒီးဆ်အမှတ် - (၁၈၄၂)၊
အိမ်နီးချင်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသော အထက်ဖော်ပြပါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဩဝါဒတော်အား အလေးအနက် စဉ်းစားဆင်ခြင်အပ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေများနှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရိတ္တမွန်
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ညီနောင်မိတ်ဆွေများနှင့်ကောင်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် စာရိတ္တမွန်ကို ဖော်ပြကြရပေသည်။
- မိတ်ဆွေများအားချစ်ခင်ခြင်း၊၄င်းတို့၏ကောင်းမှုများ၌ အားပေးကူညီခြင်း၊၄င်းတို့ အမည်ကောင်းရစေခြင်း ။
- မိတ်ဆွေများ၏ ချို့ယွင်းချက်၊အားနည်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ပေးခြင်း၊ မိတ်ဆွေများ၏ ကောင်းမှုများကို အများသိစေခြင်း၊ကောင်းရာလုပ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း။
- မိတ်ဆွေအတွက် ကောင်းသည့်အရာကို နှစ်သက် ချစ်ခင်ခြင်းနှင့် မိတ်ဆွေအတွက် မကောင်းသည့် အရာကို မနှစ်မြို့ မုန်းတီးခြင်း ။
- မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦး မကျန်းမာပါလျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှု မေးမြန်း အားပေးခြင်းနှင့်် လိုအပ်ချက်ကို ကူညီခြင်း၊ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို လက်ခံခြင်း ။
- မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးက မကောင်းပြုလျှင် အကောင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊အဆက်ဖြတ်မှုကိုပြန်လည် ဆက်သွယ်ခြင်း။
- မိတ်ဆွေ သိက္ခာကျစေသော ကိစ္စမှ ရှောင်ခြင်း၊ မနာလို ဝန်တိုမှုမဖြစ်ခြင်း၊ဆက်ဆံရေးစည်းဘောင်မကျော်ခြင်း။
မိတ်ဆွေများနှင့် စပ်လျဉ်းသော မှတ်သားသင့်သည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဩဝါဒတော်တစ်ရပ်ရှိပါ၏။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင် အကောင်းဆုံး အဆွေတော်မှာ
မိမိ မိတ်ဆွေအပေါ် အကောင်းဆုံး ဆက်ဆံသူဖြစ်သည်ဟု
မည်သူမဆို မိမိအကျင့်စာရိတ္တကို ကောင်းမြတ်စေပါလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူအား ချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မူပေမည်။ လူသားများသည်လည်း ထိုသူအား ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြပေမည်။
မည်သူမဆို မိမိအကျင့်စာရိတ္တကို ဆိုးသွမ်းစေခဲ့ပါလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူအား မုန်းတီးရွံရှာတော်မူပေမည်။ လူသားများသည်လည်း ထိုသူအား မုန်းတီးရွံရှာကြပါလေမည်။
အသင့်အား ဖန်ဆင်းပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသောအရှင်၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ခံယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် အသင်၏ စာရိတ္တကို ကောင်းမြတ်ပါစေကုန်။
မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ကျွန်ုပ်လိုချင်မျှော်လင့်သည်မှာ ဤအရာပင် ဖြစ်လေသတည်း။
* Compiled & Published by :
* First Edition: April 2002
* Supervised by :